အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W အခြေအနေ update | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W အခြေအနေ update
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W TWENTY-THREE ၏ နောက်ဆုံးရရှိသော data များအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၄၄ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဂူအမ်ကျွန်းအနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၁၄ဝ ခန့်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်သို့ တစ်နာရီ ၁၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး ယခုအတိုင်းဆက်လက်ရွေ့လျားပါက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှ ၆၇၅ မိုင်ခန့် သို့ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မနီလာမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၄၃ဝ ခန့်သို့ နောက် ၇၂ နာရီအတွင်းရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မုန်တိုင်းများ ကမ်းရိုးတန်းသို့ ချဉ်းကပ်လာစဉ် ရွေ့လျားမှုနှုန်းလျော့ကျသွားတတ်သဖြင့် ထို့ထက်ပို၍ နောက်ကျပြီး ချဉ်းကပ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် data များမှ ပုံဖေါ်ရရှိသည့် လမ်းကြောင်းထက် မြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ် တက်သွားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည် မုန်တိုင်း 22W(LUPIT) ကဲ့သို့ မြောက်ပိုင်းသို့ထပ်မံ ရောက်ရှိကာ အားလျော့သွားနိုင်ပြီး၊ မူလ ခန့်မှန်းရာလမ်းကြောင်းသည်လည်း ပြောင်းလဲမှု ရှိလာနိုင်သေးကြောင်း ခန့်မှန်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 23W, tropical-storm, twentythree, weather. LeaveaComment »
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုကိုကျော်လာပြီ
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W – MIRINAE ဟု အမည်ပေးပြီ »